अमेरिकी सेनाले छाडेको ४५ दिनमै ढल्यो अफगान सत्ता ! - Sainokhabar
होमपेज / अन्तराष्ट्रिय समाचार / अमेरिकी सेनाले छाडेको ४५ दिनमै ढल्यो अफगान सत्ता !
३१ साउन, काठमाडौं । अफगानिस्तानको एकपछि अर्को सहर कब्जामा लिएको चरमपन्थी विद्रोही संगठन तालिबानका लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति असर्फ घानीले देश छाडेका छन् ।